Ciidamada Dowladda oo bilaabay howlgal wado furis ah & Dagaal ka socda G/Shabeellaha hoose -News and information about Somalia
Home Warkii Ciidamada Dowladda oo bilaabay howlgal wado furis ah & Dagaal ka socda...
Ciidamada Dowladda oo bilaabay howlgal wado furis ah & Dagaal ka socda G/Shabeellaha hoose
Ciidanka Xoogga dalka ee deegaanada koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada Qorshayaal kala duwan kuwaas Al Shabaab looga saarayo deegaanada ay ku sugan yihiin Gobolada dalka Soomaaliya.
Ciidanka ayaa diyaar garoow waxaa ay ugu jiraan sidii loo furi lahaa jidadka xiran ee gobolada Bay, Bakool iyo Shabeellahaha hoose,sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan Ciidanka dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed.
Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan Timacade Taliyaha Qeybta 60-aad ee Ciidanka Xoogga dalka oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay oo la hadlay Warbaahinta Dowladda ayaa sheegay in ciidanku diyaar garow buuxa u galay sidii Ak-Shabaab uga saari lahaayeen deegaannada ay gacanta ku hayaan.
Taliyaha ayaa dhanka kale waxaa uu tilmaamay in gobolka Shabeellaha hoose dhawaan laga bilaabi doono howgal safbalaaran ah kaas oo ah mid horay loo sii qorsheeyey.
Hadalka Taliyaha qeybta 60-aad ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay in ka badan 400 oo askari kana mid ah Ciidanka Xoogga dalka tababar loogu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo waxaana munaasabadii xiritaanka ka qeyb galay Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Laftagareen.
Previous articleSAWIRRO: Wasiirka Maaliyadda Oo Kormeeray Dhismayaal Muhiim Ah
Next articleWasiir Isloow & Kheyre oo dhaqaalo xad dhaaf ah ka hela dhagxaanta lagu gooyo jidadka Muqdisho
DHAGEYSO: Ergada Beesha Mudulood Oo U Ambabaxday Dhuusamareeb
QM oo shaacisay in Kenya ay ka been sheegtay kiiska ‘muranka’...